Miresaka momba ny fiasan'ny zipo ballet TUTU - Vaovao - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
Home > NEWS > Vaovaon'ny orinasa > Miresaka momba ny fiasan'ny zipo ballet TUTU
Zipo Ballet TUTUno akanjo dihy malaza indrindra amin'ny ballet kilasika, izay nalaina avy tamin'ny zipo ballet an'i Louis XIV. TUTU dia vita amin'ny kofehy mafy ary miendrika pancake. Izy io dia symmetrika estetika.
Izy io dia miavaka amin'ny zipo tena fohy, tsy mihoatra ny halavan'ny lohalika, ary mivelatra avy amin'ny andilana. Miendrika fohy izy io ary manana lamba landy misy sosona maromaro. Amin'ny ankapobeny, kofehy kofehy enina na maromaro no ampiasaina, izay misy sosona.
Raha ny fahitan'ilay mpilalao sarimihetsika, ny zipo TUTU dia tena sarotra ho an'ny mpilalao. Noho ny andilana dia saika ny telo ampahefatry ny tongotra no miharihary, tsy misy miafina, mba hahafahan'ny mpanatrika mankasitraka ny hatsaram-panahin'ny mpandihy fihetsiky ny tongotra sy ny endrik'izy ireo mahafinaritra, izay midika fa tsy izy ilay mpilalao sarimihetsika navela. Ny bikan'ny tongotra sy ny fihetsiny dia somary mahasosotra ihany, izay habibiana ateraky ny resaka teatra, dihy.
Ho an'ny mpilalao sarimihetsika dia tsy azo atao foana ny manao akanjo lava TUTU lafo vidy. Mandritra ny fiofanana dia hanana zipo TUTU tsy misy kofehy kely izy ireo ary mahazatra manao fanamiana fanatanjahan-tena ho an'ny famerenana isan'andro.
Ho fanampin'izany, ny TUTU ho an'ny fampisehoana matetika dia manana tampon-kazo mifanandrify ary pataloha ambany mifandray mivantana. Mila mianiana eto aho fa ny ballerina manao zipo TUTU mandritra ny fampisehoana. Ilay antsoina hoe pataloha miharihary dia raha ny marina dia ampahany amin'ny akanjo fandihizana.
Na izany aza, ny asa nahatonga ny TUTU teo amin'ny alitara sy hatrany an-tampony no "Swan Lake" mahazatra indrindra, ary na dia miteny aza ny olona hoe ballet, dia hieritreritra ny sahirana fotsy an'ny zipo fotsy TUTU madio sy ny maintin'ny mainty manjelanjelatra izy Zipo TUTU. swan.
Teo aloha:Ny fitaoman'ireo akanjo baleta amin'ny fironana lamaody ankehitriny
Manaraka:Fenitra akanjo Ballet tutu